♦ Leaveacomment	Outsourcing of Training
Government-Supported Job Training တော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ ကလဲ Training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေပေးတာမျိုးတွေ၊ ငွေကြေးကူညီပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အ မေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာဆိုရင် Quick Start (Georgia), Smart Jobs (Texas), and Partnership (Alabama) အစီ အစဉ်တွေဟာ လူသိများတဲ့ Training Support Efforts တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Training တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ပုံမှာဆိုရင် Training methods တွေဖြစ်တဲ့ instructor-led classrooms, online self-study, virtual classrooms, and other methods, including workbooks and videos တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Training ပေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ SOURCE: “Training 2009 Industry Report,” Training, November/December 2009, pp. 32–36.
← HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၃ )	HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၅ ) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...